25 / 02 / 2020 26 / 02 / 2020 ဂရေဟမ် 1224 Views စာ0မှတ်ချက် ဆုပေးပွဲ, Lego, Lego ရုပ်ရှင်, The Lego ရုပ်ရှင် 2, The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art
အဆိုပါ Lego ရုပ်ရှင် 2: ဒုတိယ Part မိသားစုများအတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆုကို (၂၀၂၀) Movieguide Awards မှရရှိခဲ့သည်။
ချီးမြှင့်ရာသီရက်ရက်ရောရောမဖြစ်ပေမယ့်နေစဉ် The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်artကာတွန်းကားသည်မိသားစုများအတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆုကို ၂၀၂၀ Movieguide Awards တွင်ရရှိခဲ့သည်။
“ ဒီရုပ်ရှင်တွေကိုရိုက်ကူးရတာအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Trish [Gar, တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ] နဲ့ကျွန်တော်ကဒါကိုကြည့်ရင်းပရိသတ်နဲ့ကြည့်ရတာ။ ငါတို့ပြက်လုံးတွေထဲကတစ်ယောက်ကိုရယ်နေတဲ့အဖေကိုကြည့်တာကအေးအေးဆေးဆေးမရှိဘူး။ သူက ၈ နှစ်အရွယ်သမီးလေးကိုကြည့်ပြီးသူကတူညီတဲ့ပြက်လုံးကိုရယ်နေတယ်” ဟုသူ Mike Mitchell ကပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါဟောလိဝုဒ်သတင်းထောက်.
အဆိုပါ Lego ရုပ်ရှင်2Emmet နှင့်သူ၏မြင်သည် friends ဂီတဖြည့်ထားသော Systar System သို့သွားစဉ်သူတို့သည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော Rex Dangervest ကိုကြုံတွေ့ရသောအာကာသထဲတွင်ရှိသည်။ ခရစ်ပရက်ပ်သည် Emmet အဖြစ်သူ၏အခန်းကဏ္prကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည် Batman.
အဆိုပါ Lego ယခုအချိန်ထိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို Warner Bros. မှဖြန့်ချိခဲ့သော်လည်းသဘောတူညီမှုမှာသက်တမ်းကုန်သွားပြီဖြစ်သည် ဂိမ်းကိုလွှဲပြောင်းရယူရန်ဆွေးနွေးမှုများယခုဖြစ်ပါတယ်.
← Lego Marvel Spider-Man 76151 Venomosaurus တရားဝင်ပုံရိပ်တွေခြုံငုံ
Jens Nygaard Knudsen -“ LEGO မှာကျွန်တော်တို့တီထွင်ခဲ့တဲ့တီထွင်သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ” →